12Stone ဘုရားကျောင်းသည်ဝေးလံသောကျောင်းများရှိအသုံးပြုရန်အတွက် FOR-A HVS-100 ခရီးဆောင်ဗီဒီယို Switchers ကိုရွေးချယ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 12Stone ဘုရားကျောင်းရွေးချယ်မှုအတွက်-တစ်ဦးကနယူးအဝေးမှကျောင်းခွဲမှာအသုံးပြုမှုများအတွက် HVS-100 အိတ်ဆောင်ဗီဒီယို Switcher
FOR-တစ်ဦးရဲ့ Switcher ကိုးကှယျမှုရဲ့လေးဝေးလံခေါင်သီကျောင်းခွဲ၏အိမျတျောအသီးအသီးအဘို့တည်စိတ်ကြိုက်စနစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း
ထင်းရူးပင်,, CA - ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းသို့ရောက်ရှိရန်နှင့် 30,000 အသင်းသားတွေကိုကျော်၎င်း၏လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာပရိသတ်တို့အားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုးကှယျမှုပေးနေတဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဂျော်ဂျီယာ-based 12Stone ဘုရားကျောင်း®နင်္ဂနွေနေ့နံနက်အပေါ်ဝတ်ပြုရာအိမ်များသို့ငါးခုဧရိယာကျောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲငှါရှာကြံလေ၏။ တဦးတည်းတည်နေရာကျောင်းအားကစားရုံ၏စနစ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, ဒါပေမယ့်တူညီထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုခေါ်ကျန်ရှိသောနေရာများနိုင်ဘူး။ long-အချိန်နည်းပညာမိတ်ဖက်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့ အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်း တစ်နာရီအောက်မှာတစ်ဦး 12Stone ဘုရားကျောင်းအိတ်ဆောင် Campuscomplete A / V ကို / L ကို Set-up ထောက်ပံ့ပေးမယ့်ပြီးပြည့်စုံသော, ဆန်းသစ်, ခရီးဆောင်ဖြေရှင်းချက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ စနစ်ရဲ့ခြုံငုံဒီဇိုင်းကိုမှကီးဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု features တွေတစ်ကြံ့ခိုင်အမျိုးမျိုးပေးစဉ်ကအလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်မယ်လို့တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဗီဒီယိုခလုတ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် FOR-တစ်ဦးရဲ့ HVS-100 ခရီးဆောင်ဗီဒီယိုကိုခလုတ် စုံလင်သောရှေးခယျြမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းတစ်နာရီအောက်မှာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု Set-up နှင့်အတူ 12Stone ဘုရားကျောင်းရဲ့ဝေးလံခေါင်သီကျောင်းခွဲများကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ပြီးပြည့်စုံသော, ခရီးဆောင်ဖြေရှင်းချက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ကထုံးစံအပြည့်အဝဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များပါရှိသည်နှင့်အ FOR-တစ်ဦးက HVS-12 ခလုတ်တစ်ဦးလည်းပါဝင်သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏ 100Stone ရဲ့ခရီးဆောင်ကျောင်းခွဲများအဘို့အလေးတူညီစနစ်များ, built" ဒါဝိဒ်သည် Roche, နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ TI ၏ဆုရအသင်းယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့််ထမ်းဆောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုစနစ်များပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကများအတွက်စီမံကိန်းမန်နေဂျာကရှင်းပြသည်။ "ဒီ Switcher ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အလွယ်တကူသယ်ဆောင်ပေး - မရှိမဖြစ်စီမံကိန်းကိုလိုအပ်ချက်များကို 12Stone On-site ကို၎င်းစနစ်များကိုသိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ကြောင်းကတည်းက, ထို့နောက်သူတို့ကိုထွက်လှိမ့်နှင့်သူတို့တက်ရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏အပတ်စဉ်ဘဏ်ဍာများအတွက်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွက်အပြေး။ "
12Stone ဘုရားကျောင်းရဲ့ဘဏ်ဍာကိုလည်းန်ဆောင်မှုကာလအတွင်းမော်နီတာစင်ပေါ်ကိုမှသီးခြား feeds တွေကိုပြောင်းက၎င်း၏အော်ပရေတာ Solutionenabling အဆိုပါ HVS-100 ခလုတ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရရှိနိုင်လက်ငင်းအရေအတွက်နှင့် aux ဘတ်စ်ကားပေါ်အကူးအပြောင်း execute လုပ်နိုင်စွမ်း, 12Stone အိတ်ဆောင်ဘုရားကျောင်းမှအကျိုး။ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် CG ၏အသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းပေးမှာမှတဆင့်ဘဏ်ဍာပိုကောင်းစေပါတယ်သောနေဆဲစတိုးဆိုင်အတွက်ခလုတ်ရဲ့ကလစ်မှတ်ဉာဏ်အင်္ဂါရပ်, သေးသောအခြားအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအသစ်ကို၏ထို့အပြင်နှင့်အတူ ဂြိုဟ်တု တည်နေရာ, 12Stone ဘုရားကျောင်းယခု သာ. ကွီးမွတျအတ္တလန်တာဧရိယာတစ်လျှောက်လုံးကိုးကျောင်းရှိပါတယ်။
"Multi-ကျောင်းဝင်းအသင်းတော်များအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ထွန်းသစ်စလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ခရီးဆောင်ဖြေရှင်းချက်အချို့ကိုအမျိုးအစားကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်အစဉ်အလာဘုရားကျောင်း setting ကိုအပြင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကိုးကှယျမှုအတွေ့အကြုံများကိုရောက်စေဖို့ကူညီခြင်း, ဒီစိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်မှုတ်သွင်းခဲ့သည် "မိုက်ကယ် Wright, သမ္မတ, TI အသံလွှင့် Solutions Group နှင့်အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းကရှင်းပြသည်။
ရရှိလာတဲ့ AVL ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကတိုက်ရိုက်တီးဝိုင်းအပါအဝင်သူတို့ရဲ့တည်ဆဲနေရာများ, TI BSG နှင့်ကိုက်ညီမယ့်ဖျော်ဖြေပွဲ-Level အတွေ့အကြုံကိုထုတ်လုပ်များ၏ဘုရားကျောင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး - 12Stone အိတ်ဆောင်ဘုရားကျောင်းဖြေရှင်းချက် 2powerful အသံပြောင်းလဲနေသောအလင်းရောင်နှင့် HD ဗီဒီယိုကိုစွမ်းရည်။ Wright နှင့်အတူလက်တွဲခုနှစ်တွင် "ဖြည့်စွက် FOR-တစ်ဦးက, TI တစ်အသိုင်းအဝိုင်း၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတစ်ခုခြွင်းချက်ကိုးကှယျမှုအတှေ့အကွုံများကိုတစ်နာရီအတွင်းဝတ်ပြုမှုတစ်အိမျသို့မဆို 100-500 ထိုင်ခုံနေရာပြောင်းလဲသောဤဘက်ပေါင်းစုံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းအားဖြင့်ဤစီမံကိန်းတို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Integrated နှင့် ကိုးကွယ်မှု Tech မှဆုံးဖြတ်ချက်များသူတို့၏လက်ခံရရှိ ကိုးကွယ်မှုစီမံကိန်းများ၏အကောင်းဆုံးအိမ်များအတွက် Integrated ရဲ့ဆုချီးမြှင့် ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်။ "
FOR-တစ်ဦးကအဆိုပါထုတ်လွှင့်, postproduction နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဗီဒီယိုစျေးကွက်ဗီဒီယိုနှင့်အသံစနစ်များကိုအဓိကထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိသည်။ FOR-တစ်ဦးရဲ့ထုတ်ကုန်လိုင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, 714-894-3311 မခေါ်သို့မဟုတ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့သွားရောက် www.for-a.com.
နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုများ, ထွန်းသစ်စမီဒီယာနည်းပညာ, ပစ္စည်းကိရိယာများအားယာယီနေရာချထားခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်, ကိုးကွယ်မှုစျေးကွက်မှဖောက်သည်-အာရုံစူးစိုက်ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကယ်တင်တတ်၏။ အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစီးတီးဘုရားကျောင်း, 12Stone ဘုရားကျောင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် Point ဘုရားကျောင်းအဖြစ်ဝတ်ပြုရေးအိမ်များတွင်ကိုးကွယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုနှစ်ဆက်တိုက်ကိုးကွယ်မှုစီမံကိန်း၏အကောင်းဆုံးအိမ်များအတွက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Integrated ရဲ့ဆုကိုတော်မူပြီးမှ, သူတို့ထူးချွန်ဘို့သတိပြုမိနှင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီမှကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်တူညီတဲ့အဆင့်ကိုယူလာရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားကြသည်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုပြောဂုဏ်ယူကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 770-441-5200 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.bluehat-design.com/.
12Stone ဘုရားကျောင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ FOR-တစ်ဦးက ဝတ်ပြုကိုးကွယ်အိမ်သူအိမ်သား ခရီးဆောင်ကျောင်းခွဲများ ခရီးဆောင် switcher ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း ဗီဒီယိုကို switch 2015-07-31
နောက်တစ်ခု: Cinegy: ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဗားရှင်း 10 အဆင့်မြှင့်မှုများ @IBC2015